आँखामुनि डार्क सर्कल किन देखिन्छ ? जान्नुहोस - ज्ञानविज्ञान
तपाईँ एसी वा ताप दिने कोठामा हुनुहुन्छ भने त यसको असर सिधै आँखाँ मुनिको भागमा पर्न जान्छ । तपार्इँ थकित हुँदा पनि यस्तो कालो धब्बा र रेखा देखिन्छ ।
‘जब थाक्नुभएको छ वा कमप्युटरमा बढी समय बस्नुहुन्छ वा धुलो र धूवाँ निस्कने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने यसले तपाईँको आँखाको छालामा चिल्चिल्याउँछ । तपाईँ बिस्तारै आँखालाई रगेट्न वा घोट्न थाल्नुहुन्छ ।
अनि आँखााँ धब्बा र रेखा देखिन्छ,’ उनी भन्छिन् । तपाईँलाई राम्रोसँग निन्द्रा पुगेको छैन भने पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ । ‘अनिदै बस्दा तपार्इँको छाला खराब देखिन्छ ।
कतिपय धब्बा भने वंशाणुगत कारण पनि हुन सक्छन् । त्यसैगरी उमेर छिप्पिदै जाँदा वा पाको भएपछि पनि यस्तो समस्या देखिन्छ ।
बुढेसकालमा आँखाको वरपर रहेका कोमल तन्तुहरु खुकुलो हुने र चिल्लोपन बिस्तारै हराउन थालेपछि पनि यस्तो धब्बा देखिन्छ । ‘बृद्धा अवस्थामा आखाँमुनिको भित्री भाग खोक्रो हुदै जान्छ, तसर्थ आँखामा प्रकाश आर्वतन हुदैन जसका कारण कालो छायाँको असर देखिन्छ,’ ।
कतिपयको आँखाको तल्लो भागमा कालो धब्बा र घेरा बस्छ । कालो धब्बा आफैमा छालाको रंग होइन, बरु रगत र पानीको प्रवाहको कम हो । दिनमा यस्ता धब्बा अझै स्पष्ट देखिन्छ ।
सुख्खा हुँदा यस्तो धब्बा झनै देखिन्छ । ‘जब तपाईको शरिर सुख्खा हुन्छ वा शरिरमा पानीको मात्रा न्यून हुन्छ छालाको आधारभूत पत्र अर्थात् डर्मिसमा रगत र पानीको प्रवाह न्यून हुन्छ । अनि भित्री छाला प्रष्ट रुपमा कालो देखिन्छ’ ।
तपाईँले अघिल्लो रात सुख्खा खानेकुरा खानुभएको छ वा पानी कम पिउनुभएको छ भने पनि भोलिपल्ट बिहान आँखाको तल्लो भागमा घेरा पर्नेदेखि कालो धब्बासम्म हुन्छ ।
अझ साँझ पख कफी खानुभएको छ भने त यसको स्ष्ट असर भोलि बिहान आँखामा देख्नुहुन्छ । कफीले आँखाको नरम छालाको पानी विस्तारै सोसिदिन्छ र छाला कालो हुन्छ ।
Topics #आँखामुनि डार्क सर्कल
Don't Miss it दालचिनीका फाइदा थाहा पाउनुहोस्
Up Next कफीले छालाको स्वास्थ्यमा पूराउने फाइदा निम्न छन्
यस्ता छन्, भिटामिन सीका फाइदाहरु
१. घाउ भर्छ : भिटामिन सीमा उत्कृष्ट हिलिङ पावर हुन्छ । जसले छालाको घाउ चाँडै भर्न मद्धत गर्छ । प्रतिरोध…
खोप भनेकाे के हो ? यस्ता छन् खोप लगाउँदा हुने फाइदाहरू,जान्नुहाेस्
खोप भनेको रोग लाग्नबाट बचाउन भ्याक्सीन दिई शरीरको रोगसंग लड्ने क्षमता बढाउनु हो ।आजीवन रोग लाग्नबाट बचाउन खोपको प्रयोग गरिन्छ…
चुइंगम पेटमा पुग्यो भने के हुन्छ ? जान्नुहोस
चुइंगम पेटमा पुग्यो भनेर डराउनु नपर्ने रहेछ । नयाँ अध्ययन अनुसार, चुइंगम पच्छ पनि अनि त्यसले हाम्रो स्मरणशक्ति पनि बढाउँछ…